♦ Ny volana Novambra hatramin'ny Avrily no vani-potoana hisian'ny rivo-doza. Ny rivo-doza dia faritra andro ratsy mitondra orambe sy rivotra mifofofofo amin'ny afangainam-pandeha 63km:ora, 300 hatramin'ny 1500km ny velarany ary 8km hatramin'ny 10km ny haavony... ♦ Ny varimbazaha dia ao anatin'ny fianakaviamben'ny "graminée". Novolena sy novokaraina hatao sakafo ny varimbazaha ary amin'ny faritra mafana sy be orana no mety aminy...
♦ Ny Ong MICET na Madagascar Institut pour la Conservation des écosystèmes Tropicaux dia misehatra sy miaro ny tontolo iainana. Ny MICET dia noforonina tamin'ny taona 1997 ary nisehtra tamin'ny lafin-javatra maro : fanabeazana, fahasalamana, fampandrosoana ny tontolo eny ambanivohitra... ♦ Ny sakamalao na sakaitany dia zava-maniry fanao amin'ny sakafo ary azo hitsaboana. Ny tetiandro hiotazana ny vokatra dia enim-bolana. Ny sakamalao dia manana anarana ara-tsiantifika : Zingember officinale...
Federesionina "Milano rika"
Naseho ny : 19 aogositra 2021
♦ Ny Federasionina "Milano rika" dia ivondronan'ireo fikambanana mpanjono madinika miisa 15, izay ahitàna mpanjono miisa 700 any amin'ny tapany atsimon'i Madagasikara. Ny mpikambana sy ny vondron'olona ifotony dia vonona ny hiaro ny rika sy ny harena ao anatiny... ♦ Ny akanga : karazam-borona avy aty Afrika, misy karazany dimy manerantany fa karazany iray ihany no misy eto Madagasikara. Voasokajy ho isan'ny fianakaviambe ny antsoina hoe : "fasianides" ny akanga...
Naseho ny : 12 aogositra 2021
♦ Ny FIKITAMA na FIkambanana KIadin'i TAntsaha MAngoro dia fikambanana miaro ny tontolo iainana ary miady amin'ny tsindrihazolena mianjady amin'ny tantsaha. Ity fikambana ity dia niforona tamin'ny taona 2015... ♦ Dauphin : biby mampinono, misy karazany roa dia ireo mivelona an-dranomamy sy ny an-dranomasina. Ny Platanistidés dia misy karazany 3-4 fa ny Delphinidés dia ahitana karazany 30, maneran-tany... ♦ Delta : nahita vahaolana hamahana ny olan'ny tsy fampian-drano noho ny fiatraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro any amin'ny Kaominina Bemanonga distrika Morondava...
Pejy 1 amin'ny 11